बाजे र दुई नातिको एउटै चिता | Lifemandu
बाजे र दुई नातिको एउटै चिता
| बुधबार, साउन, २०७४
सुर्खेत, ३२ साउन । उनीहरू एउटै थालमा भात खान्थे । फुर्सदमा तीनै जना बाजे–नाति मिलेर रमाइलो पनि गर्थे । दौंतरीजस्ता बाजेनाति प्रायः एउटै ओछ्यानमा सुत्थे । बाँचुन्जेल तीनै जना सँगै रमाए । मृत्युपछि पनि उनीहरूको एउटै चिता बन्यो । मध्यरातमा पहिरोले घर बगाउँदा ज्यान गुमाएका सुर्खेत गुर्भाकोट नगरपालिकाका तीन बाजेनातिको सोमबार एउटै चितामा दाहसंस्कार गरिएको छ ।
उनीहरूले पीडित परिवारलाई राहतस्वरूप १४ हजार एक सय ४६ रुपैयाँ प्रदान गरेका हुन् । यस्तै, गुर्भाकोट नगरपालिकाले प्रतिमृतक २५ हजार रुपैयाँका दरले राहत प्रदान गरेको नगरपालिकाका मेयर हस्त पुनले जानकारी दिए । नगरपालिकाले पीडित परिवारलाई खाद्यान्न पनि उपलब्ध गराएको छ । यस्तै, रेडक्रसले पनि पीडितलाई भाँडाकुँडा र कपडा वितरण गरेको छ । अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
वाम गठबन्धनलाई तालमेल मिलाउन सकस : महरा र पोखरेलले किन रोजे एउटै क्षेत्र ?
काठमाडौँ, कात्तिक ९ । २०७४ माओवादी केन्द्र र एमालेका दुई प्रभावशाली नेताले दाङको एउटै क्षेत्र दाबी गरेपछि वाम गठबन्धनलाई तालमेल मिलाउन सकस परेको छ ।
मिलेकै हो त उत्तर र दक्षिण कोरिया ? एउटै झण्डामा मार्च गर्न तयार
सोल, माघ ४ । उत्तर र दक्षिण कोरिया उनीहरु दुई देशका रुपमा टुक्रिएपछि पहिलो पटक एउटै झण्डामा मार्च गर्न सहमत भएको समाचार छ ।
माध्यमिक शिक्षा परिक्षा कक्षा १० एसइई को नतिजा प्रकाशनमा गम्भीर त्रुटि देखिएको छ ।